I-Chinhoyi Tree House -Igumbi laseNamibia - I-Airbnb
I-Chinhoyi Tree House -Igumbi laseNamibia
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Felicity
U-Felicity Ungumbungazi ovelele
I-Orange Grove iyindawo enokuthula yaseChinhoyi. Indlu igcwele ukukhanya nendawo enengadi enkulu evulekile nezihlahla eziningi ezigcwele izinhlobonhlobo zezinyoni. Indawo yokupaka ekhaviwe iyatholakala. Indawo yezitolo enkulu iyi-1.5 km ukusuka phansi komgwaqo. Ikhishi likhulu futhi linazo zonke izinsiza, igumbi lokudlela lingahlalisa abantu abayi-10 futhi kokubili ikhishi negumbi lokudlela kunezicabha eziyingilazi ezivulekele endaweni yokubhukuda. Igumbi lakho lokulala linendlu yokugezela eyi-ensuite kanye novulandi walo wangasese.
Inkonzo yasendlini ihlinzekwa ukuhlanza indlu njalo ekuseni. Kunelondolo elinomshini wokuwasha kanye nomugqa wangaphandle wokomisa izingubo. Ungase uzinikeze owakho okokugeza bese uziwashela futhi u-ayine noma ngemali encane ukuwawasha kwakho unganakekelwa. Unogada uzobe esebenza njalo kusihlwa kusukela ngo-6pm kuye ku-6am ukuze uphephe futhi imoto yakho uma unayo.
Cishe i-10 km enyakatho ye-villa ungavakashela i-Chinhoyi Limestone Caves eyaziwa kahle ukujula kwayo okungakacaciswa.
Njengombungazi wakho, ngihlala ibangana nje ukusuka ekhaya ukuya ekamelweni lakho lezivakashi futhi ngitholakala izinsuku eziningi nganoma yiluphi usizo ongase uludinge.
UFelicity Ungumbungazi ovelele